Europa Universalis IV bilaash ah waqti xaddidan Dukaanka Ciyaaraha Epic | Waxaan ka imid mac
In kasta oo tirada cayaaraha ee ragga Ciyaaraha Epic ay na siiyaan bilaash, badiyaa waxay u badan yihiin Windows, waxaan sidoo kale helnaa ciyaar aan caadi ahayn oo sidoo kale la jaan qaada macOS. Toddobaadkan, waan awoodnaa soo degso ciyaarta Europa Universalis IV oo bilaash ah, ciyaar in Waxay qiimo ku leedahay Dukaanka Ciyaaraha Epic oo ah 31,99 euro.
Soo jeedintu waxay noqon doontaa la heli karo ilaa Khamiista, Sebtember 7 markay tahay 4:59 p.m. (Waqtiga Jasiiradda Isbaanishka). Si looga faa'iidaysto dalabkan, waxaa lagama maarmaan ah in akoon lagu yeesho Dukaanka Ciyaaraha Epic ama la abuuro mid gaar ahaan si looga faa'iidaysto dalabkan. Sida iska cad, haddii aad haysato Windows PC, waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa dalabkan, maadaama sida Steam, marka aad iibsaneyso cinwaan, waxaan helnaa dhammaan noocyada la heli karo.
1 Laga soo bilaabo Europa Universalis IV
2 Europa Universalis IV Shuruudaha Ugu Yar
Laga soo bilaabo Europa Universalis IV
Europa Universalis IV waa qeybtii afaraad ee sheekadan, ciyaar dhisme boqortooyo taasi waxay ina gelineysaa hoggaanka ummad ay tahay inaan ku hagno sannadaha si aan u abuurno boqortooyo ka kooban adduunka oo dhan.
Waa inaan qarankeenna ku xukumnaa qarniyaal qoto dheer oo aan hore loo arag, xorriyad iyo hufnaan halkaas oo ganacsiga, dagaalka, diblomaasiyadda iyo sahamintu ay noolaan doonaan waa cinwaan ay tahay inaan tijaabi xirfadahayaga sidii istaraatiiji ahaan imtixaanka.
Europa Universalis IV Shuruudaha Ugu Yar
Si aad ugu raaxaysato Europa Universalis IV, qalabka ugu yar ee daruuriga ah waa inuu maamulaa a Intel Core 2 Duo oo leh 4GB oo RAM ah iyo 6 GB oo disk adag ah, oo ay weheliso garaaf 1 GB ah.
Intaas waxaa sii dheer, waa xiriirinta internetka ayaa loo baahan yahay, GLSL 1.3, OpenGL 2.1 iyo macOS Siera 10.12 Inkasta oo codadka ay ku qoran yihiin Ingiriis kaliya, qoraallada waxaa laga heli karaa Isbaanish oo ka yimid Spain.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Europa Universalis IV bilaash ah waqti xaddidan Dukaanka Ciyaaraha Epic
Qoob -ka -ciyaarka taariikhaha ee soo -saarista taxanaha Apple Watch 7